GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1. Ọ bụ ihe i kwesịrị ime. Baịbụl kwuru otú Ndị Kraịst kwesịrị isi na-akpa àgwà. Ọ sịrị: “Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile.”​​—⁠Ndị Hibru 13:⁠18.
“M gbalịsiri ike iji hụ na m na-ekwu eziokwu mgbe niile, na iji isi m buru ihe m metara. M mejọọ ihe, m na-ekweta ozugbo.”​​—⁠Alexis.
2. Mmadụ kweta ihe o mejọrọ, o nwere ike ime ka a gbaghara ya. Baịbụl kwuru, sị: “Onye na-ezochi ajọ omume ya agaghị enwe ihe ịga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ya ma na-ahapụ ya ka a ga-emere ebere.”​​—⁠Ilu 28:⁠13.
“Ọ dịghị mfe mmadụ ịkata obi kweta ihe o mejọrọ. Ma, ime otú ahụ ga-eme ka ndị mmadụ tụkwasị gị obi. Ha ga-amata na ịbụ onye na-ekwu eziokwu, ha agaghị ewerekwa ihe ahụ i mejọrọ ka oké ihe.”​​—⁠Richard.
3. Nke ka nke bụ na ọ na-eme Jehova Chineke obi ụtọ. Baịbụl kwuru, sị: “N’ihi na onye aghụghọ bụ ihe arụ n’anya Jehova, ma ya na ndị na-eme ihe n’eziokwu na-enwe mmekọrịta chiri anya.”​​—⁠Ilu 3:​32.
“Mgbe m mechara otu ihe dị ezigbo njọ, ọ bịara doo m anya na ọ ga-aka mma ikweta ihe m mere kama izochi ya. O nweghị otú Jehova ga-esi agọzi m ma ọ bụrụ na mụ anaghị eme ihe otú ọ chọrọ.”​​—⁠Rachel.
Ọ dịghị onye na-adịghị emejọ ihe. (Ndị Rom 3:​ 23; 1 Jọn 1:⁠8) Dị ka anyị hụrụ, mmadụ ikweta ihe o mejọrọ ozugbo o mere ihe ahụ na-egosi na onye ahụ bụ dimkpa, nakwa na ọ dị umeala n’obi.
“Mụta ihe n’ihe ndị i mejọrọ n’oge gara aga ka ị ghara ime ha ọzọ. Ma, a nọkwala na-eche gbasara ha mgbe niile ka ọ ghara ime ka ị daa mba.”​—⁠Elliot.
“M na-ewere ihe ndị m mejọrọ ka ihe ndị m ga-eji na-amụta ihe na ihe ndị ga-enyere m aka ịghọ ezigbo mmadụ. Eche m na ọ bụ ihe kacha mma ime n’ihi na ọ ga-enye aka ka i si na ya mụtakwuo ihe.”​—⁠Vera.
“O nwere ụfọdụ ndị ihe ha mejọrọ na-ewute, nweekwa ndị nke ọ na-enweghị ihe ha ji ya kpọrọ. Ma, ọ kacha mma ka ihe i mejọrọ wute gị ka i si na ya mụta ihe ga-enyere gị aka ighara ime ya ọzọ.”​—⁠Connor.
“Ndị na-agba ọsọ na-eme ha daa, ha ahapụ ihere, jisie ike bilie ma gbarakwa na-aga. Ọ bụ ihe i kwesịrị ime ma ọ bụrụ na i mejọọ ihe. I si n’ihe ndị i mejọrọ mụta ihe, ma gharakwa ime ha ọzọ, ị ga-eme ka ndụ gị kakwuo mma.”​—⁠Dami.
“Ọ kacha mma mmadụ iche otú ihe o mejọrọ ga-esi nyere ya aka, ka ihe ndị ọ ga-amụta na ha nyere ya aka ịghara ime ha ọzọ. Ekwela ka ha nọgide na-enye gị nsogbu n’obi, kama, ka ihe ndị ị mụtara na ha baara gị ezigbo uru.”​—⁠Zipporah.